संसदबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुमोदित – Maitri News
संसदबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुमोदित
maitrinews July 26, 2016
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुमोदन भएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यही साउन १० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सो आदेशलाई अनुमोदनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा ध्वनि मतका आधारमा बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुअघिको मन्त्रिपरिषद्ले सो आदेश जारीका लागि सिफारिस गरेको जनाउँदै संविधानको धारा २९८ नयाँ सरकार गठनमा अपर्याप्त भएकाले कानुनसम्मत रुपमा सो निर्णय गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘‘के सरकारले अस्पष्टतालाई हटाउनु पर्दैन ? नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलाउनु पर्दैन ? मार्गप्रशस्त गर्दा के गल्ती भयो ?’’
उहाँले सो आदेशबारे उत्पन्न चिन्ता पात्र र प्रवृत्तिमा भर पर्छ भन्दै भविष्यमा यसबाट कुनै अनिष्ट नहुने विश्वास दिलाउनुभयो । सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार रहे पनि दलहरु तयार नभएकाले बाधा अड्काउको बाटामा गइएको बताउनुभयो । उहाँले संसद् चलिरहेको समयमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश हुने अभ्यास विगतमा पनि भएको स्मरण गराउनुभयो ।
त्यसअघि सांसद लोकमणि ढकाल, रामहरि खतिवडा, मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायतले छलफलमा भाग लिँदै आदेश जारी हुनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको थियो ।
संसद्को अर्को बैठक यही साउन १७ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।
Next Next post: बाढीपहिरोमा परी ५४ जनाको मृत्यु , २१ बेपत्ता, १० घाइते